တွေ့မိမှတ်မိသမျှ: Singapore မှ Australia သို့ (၄)
အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းဘယ်ကစရမှန်းမသိတာ... အခုတော့နဲနဲအားရှိသွားပြီ။
auzi က PR ရမှသွားရမှာလား၊ အလုပ်အရင်ရှာရမှာလား။
SG လိုအလုပ်ရမှ PR ရတာလား သေသေခြာခြာမကွဲပြားလို့ပါ။ အားရင်ဖြေကြားပေးပါဦး... ကျွန်တော်လည်း IT သမားပါ။
PR နဲ့ အလုပ်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ လျှောက်ပြီးနောက် တစ်နှစ်လောက်ကြာအောင်စောင့်ပြီး PR ရပြီဆိုရင် အလုပ်ထပ်ရှာရ ပေအုံးမည်။ ဒါပေမယ့် ရှာရတာ လွယ်သွားပြီ။ PR ရသော်လည်း မသွားသေးပဲ တစ်နှစ်လောက်ကိုင်ထားလို့ရတယ်။ Singapore ကနေ လျှောက်ပေါ့ဗျာ။ ကိုယ်နဲ့ အပ်စပ်တယ်၊ လစာလည်းကောင်းတယ် ဆိုရင် ရွေးချယ်လိုက်ပေါ့ဗျာ။ http://www.seek.com.au တို့ဘာတို့မှာ ရှာလို့ရတာပေါ့ဗျာ။
ချွင်းချက်။ ။ကိုယ်က Technically strong သိပ်ဖြစ်တယ် ကိုယ်တတ်တဲ့ technology ကလဲ uni que ဖြစ်တယ် (ဥပမာ။ SAP သမား ၊ Security သမား၊ Datawarehouse သမား) ဆိုရင်... အလုပ်ရှင်ကလည်း ခင်ဗျားကို အရမ်းလိုအပ်တယ်ဆိုရင် အလုပ်ရှင်က 457 Visa လျှောက်ပေးတယ်။ အဲဒါ နဲ့ ထွက်လို့လဲ ရတယ်။ 457 working visa ဆိုတာကတော့ Singapore က EP လိုပါပဲ။ ပြီးတော့ 457 ဗီဇာက3လလောက်ပဲကြာတယ်။ အလုပ်ရှင် က Sponsor ပေးရတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုခက်တာက ဘယ်သူမှ အကြောင်းမသိပဲ လူစိမ်းတစ်ယောက်ကို Sponsor မပေးချင်ကြဘူး။
သင့်ခယူပါဗျာ... အခုလိုရှင်းပြပေးတာကို။ ၅ , ၆,၇ တွေလည်းစောင့်ဖတ်ပါဦးမယ်။
Thank you so much Ko Phyo Wai Kyaw.
Yangon ကနေရော Australia PR ကို လျှောက်လို့ရ ပါသလား ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေ ပေးပါနော်။
How can I apply Australia PR from Yangon? can u help me to give some information to apply from Yangon?Thanks.
မြန်မာပြည်က B.E, M.E ဘွဲ့နဲ့ စင်ကာပူမှာ SPass, EP ကိုင်ထားတဲ့သူတွေကော လျှောက်လို့ အကျုံးဝင်ပါသလား.. ကျေးဇူးပြုပီး ဖြေပေးပါအုံး။
For engineers, please check skilled migrants demand list: http://www.immi.gov.au/skilled/general-skilled-migration/skilled-occupations/occupations-in-demand.htm